Shiinaha 2-baal-gooye Madaxa Carbide Profile Insert mindiyaha soo saarayaasha iyo alaab-qeybiyeyaasha | Xinhua
Xaglaha qashin -qubka carbide -ka si loo jajabiyo geesaha, qaloocinta la hagaajiyo iyo nadiifinta geesaha caagga ah ee dhuuban. Carbide adag ayaa xaqiijisa cimri dheeri iyo iska caabinta xirashada. Si siman u hagaaji cilladaha ay sameeyeen kuwa wax jaraya inta lagu guda jiro habka marin -habaabinta oo leh saddex xabbadood oo si gaar ah loogu sameeyay 1mm, 1.5mm iyo 2mm radii. U isticmaal xoqe si aad u hubiso in aad xoqdo xoqitaanka geesaha caagga ah.
Waxaan haynaa kayd badan oo ah carbide adag oo toosan iyo mindiyo goynta radius iyo gelinta xoqan ee dhammaan noocyada iyo moodellada.
Shirkaddayadu waxay leedahay in ka badan 20 sano oo ah taariikhda wax soo saarka ee qalabka goynta qoryaha carbide tungsten carbide, oo ku takhasusay soo saarista mindiyaha dib loo rogi karo ee tungsten carbide iyo galinta carbide kala duwan ee alwaaxa.
In ka badan kala bar badeecadaha ayaa loo dhoofiyaa Yurub, Mareykanka iyo waddamada iyo gobollada kale ee horumaray. Wax -soo -saarka badeecaddu wuxuu si buuxda u buuxiyaa shuruudaha adag ee qalabka kala duwan. Tayada badeecadu waxay ku jirtaa kaalin hoggaamineed ee suuqyada qalabka alwaaxda gudaha iyo dibaddaba.
Dhererka (mm) Ballaca (mm) Dhumucdiis (mm) Gacan -qaad
Hore: qalabka alwaaxa carbide
Xiga: Carbide Radius Scraper ee Edgebander
Carbide Insert Mindiyaha